Waa sidee xaalada Magaalada Muqdisho Ee Caawa ?
Waxaa durba soo ifbaxay Nabad gelyo xumadii ay xakameeyeen Maxaakiimta islaamka ,waxaa Durba degmooyinka magaalada muqdisho la wareegay milayshiyooyin hubaysan oo aan cidna ka amar qaadan islamrkaana waxaa sii baababaya nabadii waxaa kaloo xarumaha qaarkood hubkii la wareegay milayshiyaadka qabiilooyinka waxaa soo ifbaxaya cabsida iyo welwelka dadka shacabka ahi ay ilaaween intii ay golaha maxaakiimta islaamka soomaaliyeed gacanta ku hayeen.
Sidoo kale waxaa Qaybsi loogu dhaqaaqay Hubkii ay maxaakiimta islaamku ay xereeyeen iyadoo ay Milayshiyaadkii qabiilooyinka oo Hore Hubka looga Qaaday ay hadana Hubkii Gacanta u galay Caawa ,lix bilood kadib.
Sidoo kale waxaa lays waydiinayaa nabadii aan la qabsanay lixdii bilood ee maxaakiimta islaamku inoo keeneen miyaa laynoo diidanaa ,iyo su,aalo kale oo kasoo baxaya nabada sii baaba,aysa ee kusoo fool leh magaalada muqdisho .
Waxaan la sheekaystay hooyo muumino oo haysata lix caruur ah oo abehood lagu diley isbaaro lagaga qaaday telefonka gacanta ee loo yaqaano mopileka ka hor intaanay golaha maxaakiimta islaamku aysan soo celin nabadii iyo kala dambayntii waxay ii sheegtay hooyadaasi oo ay ka muuqatay murugo ma waxay nala rabaan in caruurtayada mid mid loo dilo oo guryaha naloogu soo dhaco ,ma waxay nala rabaan inay dhiiga naga miirtaan .
'' waxay doonayaan kuwa noo diidan nabada inaysan soomaaliya noqoto meel lama ,degaan ah waxaa nafi nasoo gashay intii ay golaha maxaakiimta islaamku ay la wareegeen muqdisho iyo meelaha kaleba ''' ayay ku calaacashay hooyadaasi oo ay wejigeeda ka muuqatay murugo aan lasoo koobi karin .
Maaha hooyadaasi oo keliya ee waxaa Muuqaalka bulshada ee ku dhaqan bartmaha iyo koonfurta soomaaliya soo wajahay durba cabsi iyo welwel kala soo gudboonaaday nabad la,aanta ay la doonayaan kuwa manaxa yaasha ah ee wata cadowga tigreega ee sida weyn uga soo hor jeeda diintooda iyo xoriyadooda.
waxaa sare u kacay sicirka raashinka iyadoo ay suuqyada magaalada muqdisho ay bilaabeen inay Qaali gareeyaan maceeshada isla maanta .
Si kastaba ha ahaatee magaalada muqdisho ayaa U muuqata sidii ay ahaan jirtay lix bilood ka hor oo waxaa soo ifbaxaya milayshiyaadkii hubku gacantooda ka baxay oo durba uu gacantooda galay ,waxaa kasii daraya nabada oo durba god sii galaysa .
Faafin: SomaliTalk.com | Dec 28, 2006